Yintoni inkomfa engenamandla yokuKubiza? | Martech Zone
Yintoni inkomfa engenamandla yokuKubiza?
NgoLwesine, Julayi 23, 2015 NgoLwesine, Julayi 23, 2015 UJenn Lisak Golding
Andinakukuxelela ukuba mangaphi amaxesha ndikwinkomfa yenkomfa eyinkcitho epheleleyo yexesha. Nokuba yayisoftware ebukekayo, ababonisi abangazilungiselelanga, okanye intlekele yeaudiyo, ichitha ixesha elininzi kunye nezixhobo. Kwaye ayincedi xa ndiziva ngathi oku kuyenzeka ngaphezulu kwama-30 epesenti exesha.
Yonke intlanganiso-kwi-Intanethi okanye ngaphakathi-kutyalo-mali olwenziwa yinkampani yakho ngexesha, imali kunye nezixhobo. Nokuba olu tyalo-mali luya kuba lolulungileyo-xa ixabiso lingaphezulu kwexabiso-kuxhomekeke kwisiphumo sentlanganiso.
Ngaba uyazi ukuba amashishini amancinci achitha ngaphezulu Iibhiliyoni ezingama-37 zeedola ngonyaka kwiintlanganiso ezingeyomfuneko? Cinga malunga nomzuzu. Ngalo lonke ixesha uhleli kwintlanganiso engenamveliso, inkampani yakho ilahlekelwa yimali ngokoqobo. Kwaye ndingazama ukubheja ukuba uninzi lweentlanganiso ozihambayo zibonwa njengezingenamveliso. Njengomnini weshishini, oku kundenza ndonwabe.
Ngesixa semali esichithwe kwiintlanganiso ezingenamveliso unyaka nonyaka, kuyamangalisa ukuba bambalwa abazama ukulungisa ingxaki. Ngaba unazo izikhokelo zendlela eziqhutywa ngayo iintlanganiso? Ngaba zonke iintlanganiso zinenjongo? Ngaba abantu bayabela abanye kwaye bayalandelela emva kweentlanganiso? Ukuba uphendule ngo "hayi" kuyo nayiphi na le mibuzo, lixesha lokuba uphinde uphonononge indlela iintlanganiso eziqhutywa ngayo kwishishini lakho.
Amashishini amaninzi awazi ukuba yimalini abayichithayo kwiintlanganiso ezingenamveliso ngonyaka. Sisebenze neyethu itekhnoloji yokusebenzisana Umxhasi u-ReadyTalk ukuphuhlisa isixhobo sokubala esinokubonisa ngokuthe ngqo ukuba uchitha malini kwaye yeyiphi inkomfa engenamandla ekubiza yona. Ngezinto ezilungileyo nangakumbi, jonga ezabo ilayibrari yezixhobo ezimangalisayo.
Zama I-calculator ye-ReadyTalk yeNkomfa engenamandla Ngokucofa ikhonkco elingezantsi, kwaye uqalise ukulungisa iintlanganiso zakho ngoku!
Sebenzisa i-Calculator engenamandla
Ukubhengezwa: I-ReadyTalk ngumthengi we DK New Media!
tags: inkomfa yomsindoCalculatoriminxeba yenkomfainkomfa yentengisosekulungileingqungquthela yevidiyoiqonga lewebhu
Uyivelisa njani ngakumbi i-B2B ekhokelela kuMxholo